Midnight Sun, Edward Cullen ရဲ့အမြင်ကနေဆွေမျိုးတွေ လက်ရှိစာပေ
Juan Ortiz | 04/05/2021 15:49 | စာရေးဆရာများ, စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, Novela
သန်းခေါင်နေရောင် (၂၀၂၀) သည်အမေရိကန်စာရေးဆရာ Stephenie Meyer ၏စိတ်ကူးယဉ်စာပေဝတ္ထုဖြစ်သည် ဆည်းဆာ။ ဤခေါင်းစဉ်သည်နောက်ဆုတ်နောက်ဆုံးလွှတ်တင်ပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း (အရုဏ် ဦးစီးရီး၏သက္ကရာဇ်စဉ်ဆက်မပြတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်, 2008), ကဒုတိယအမိန့်မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းရင်း? ကောင်းပြီ သန်းခေါင် Sun က အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မူရင်းအမည် - ပထမအပိုင်း၏ဖြစ်ရပ်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသည်။ ဆည်းဆာ (2005)အက်ဒွပ် Cullen ၏တွဲဖက်ကြယ်ပွင့်၏ရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအခန်းဆက်၏အဓိကစာအုပ်လေးစောင်သည်ဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော Bella Swan ၏အမြင်နှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းသတိရသင့်သည်။
1.2 လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်သူ၏စာပေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အစအ ဦး
2 အဆိုပါ Twilight Saga
2.1.1 အဆိုပါ Saga ၏အဓိကစာအုပ်များ
2.1.2 tetralogy နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားခေါင်းစဉ်
2.2 ဆည်းဆာနှင့်ဆယ်ကျော်သက် paranormal အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ပြည့်လျှံ
3.2 Twilight နှင့် Midnight Sun အကြားခြားနားချက်များ
3.2.2 စိတ်ကျေနပ်မှုပရိတ်သတ်တွေတစ် Legion
အဖြစ်စာပေမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်တွင်လူသိများ Stephenie ကမော်ဂန် Stephenie Meyer၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကော်နက်တီကပ်ပြည်နယ်၊ Hartford ကောင်တီတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအများစုကိုမိဘများနှင့်အတူ Arizona ပြည်နယ်၊ Phoenix ရှိမောင်နှမငါးယောက်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်နေပြီ Scottsdale's Chaparral အထက်တန်းကျောင်းတွင် (သူသည်အမျိုးသားဆုပင်ရရှိခဲ့သည်) သည်သူ၏အဆင့်အတန်းကိုထင်ရှားခဲ့သည်။
နောက်ဆက်တွဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများတွင် Meyer ကသူမ၏ကြီးပြင်းလာမှုသည် Latter-day Saints of Jesus Christ ၏ပြူရီတန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အကြီးအကျယ်မှတ်သားခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးပြီးနောက် Utah ရှိဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
သူမ၏ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက်အနာဂတ်စာရေးဆရာသည်ရှေ့နေဖြစ်လာရန်စဉ်းစားခဲ့သော်လည်းသူမ၏သမီးသုံးယောက်အနက်ပထမဆုံး Gabe ကိုမွေးဖွားပြီးနောက်စိတ်ပြောင်းသွားသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် Christian Meyer နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီလမ်း ကလွှမ်းမိုး Charlotte Brontëကဲ့သို့စာတတ်မြောက်မှု၊ LM Montgomery နှင့်ရှိတ်စပီးယား, Meyer သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးအတွက်စာများကိုစတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Twilight Saga
Stephenie Meyer အဆိုအရ အကြားဇာတ်လမ်း ရေငတ်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် လူသားတစ် ဦး နှင့်ချစ်သောသွေး၏သွေးအုပ်စုသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်နှစ်လယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သူမ - သူမ၏အစ်မများကဆွဲဆောင် - သည့်အခါ၏လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်စေလွှတ်ခဲ့သည် ဆည်းဆာ တဆယ်ထုတ်ဝေအိမ်များရန်။ မူအားဖြင့်၎င်းကိုငါးယောက်ကလျစ်လျူရှုထားပြီး ၉ ခုကပယ်ချခဲ့သည်။ သို့သော်လူတစ် ဦး က Jodi Reamer၊ Writers House ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
၏ထုတ်ဝေခွင့် ဆည်းဆာ သူတို့ကိုရှစ်ယောက်ထဲမှာလေလံတင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတွင် Meyer သည် Little, Brown နှင့် Company တို့နှင့်ပထမဆုံးအခြေချခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာသည်သမိုင်းဖြစ်သည်။ မိတ္တူပေါင်းသန်းတစ်ရာကျော်ပါသည့်ဖောင်ဒေးရှင်းသည်ဘာသာစကား ၃၇ ခုသို့ရောင်းချပြီးပြန်ဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ Saga ၏အဓိကစာအုပ်များ
အရုဏ် ဦး (2008)
Bree Tanner ၏ဒုတိယဘဝ (2010)
Twilight Saga: တရားဝင်ရုပ်ပြလမ်းညွှန် (2011)
ဘဝနှင့်သေခြင်း: Twilight Reimagined (2015)
စီးရီးရှိအဓိကစာအုပ်လေးခုကိုအခြေခံပြီး Kristen Stewart နှင့် Robert Pattinson ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောအောင်မြင်သောရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေမှု ၅ ခုသည် stratospheric အမြတ်အစွန်းကိုရရှိစေသည်။ ပထမဆုံးရုပ်ရှင် (၂၀၀၈) သည်အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်း၌ဒေါ်လာ ၄၀၇ သန်းရရှိခဲ့သည်။, ဘတ်ဂျက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 37 သန်း!
ဆည်းဆာ နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ massification
တကယ်တော့, အဆိုပါ "လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အချစ်ဇာတ်လမ်း" ခေတ်ပြိုင် Gothic ဝတ္ထု၏ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Gautier ၏လက်ရာများမှတည်ထောင်ထားသောဇာတ်ကြောင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည် (ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌သေခြင်း, 1836), ဖိုး (Ligeia, 1838) နှင့် Stoker (dracula, 1898) ။ ၂၀ ရာစုတွင် Gaston Leroux (အော်ပရာ၏ Phantom, 1910) နှင့်အန်းဆန် (သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နှင့်အင်တာဗျူး, 1976), ဖြစ်ကောင်း၎င်း၏အထင်ရှားဆုံးကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Alice Norton, Christine Feehan သို့မဟုတ် JR Ward ကဲ့သို့သောစာရေးဆရာများသည်ဤဇာတ်ကြောင်းတွင်လူငယ်ဇာတ်ကောင်များကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဆည်းဆာ ဆယ်ကျော်သက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပေါ့ပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်, ကမ္ဘာတဝှမ်းပရိတ်သတ်တွေ Legion အတူ။ ဒါဟာအစထွန်းသစ်စစာရေးဆရာများသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ သူတို့အကြား:
မဂ္ဂီ Stiefvater, အ Saga ၏ဖန်တီးသူ လှုပ်
Cate Tiernan, စီးရီးစာရေးဆရာ Sweep နှင့် Balefire
Stephenie Meyer သည်ငယ်ရွယ်သော Vampire စကြာ ၀ outsideာအပြင်ဘက်တွင်မိမိကိုယ်ကိုနာမည်မည်သို့ပြုရမည်ကိုသိသည် အဘယ်သူ၏ themes များတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည်စာပေနှစ်ခုနှင့်အတူ။ ပထမက အိမ်ရှင် (2008), တစ် ဦး ဂြိုလ်သားကျူးကျော်အကြောင်းကိုသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထု။ ဒါ့အပြင် အိမ်ရှင် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအဆင့်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် New York Times ကို ၂၆ ပတ်ကြာအောင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာရုပ်ရှင်ရုံကိုအောင်မြင်စွာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်တွင်ထင်ရှား။ , ဓာတုဗေဒကောင်းသောအယ်ဒီတာ့အာဘော်နံပါတ်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သော Thriller (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရောနှောသော်လည်း) မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သန်းခေါင် Sun က Meyer ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲရှိနေခဲ့တယ်၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအခန်းများ၏ပေါက်ကြားပြီးနောက်၎င်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သော်လည်း၊ စာရေးသူ၏စကားအရသူမနောက်လိုက်များသည်သူမကိုအရှုံးမပေးဘဲထွက်လာသည်အထိထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Midnight Sun (စစ်ကိုင်း ...
ခြားနားချက်များ ဆည်းဆာ y သန်းခေါင်နေရောင်
ပေါ်တယ်၏ Sarabeth Pollock (2020) အရ Fansided, သန်းခေါင် Sun က အားဖြင့်ကျန်ကြွင်းအချို့အငြင်းအခုံသံသယတညျ့ ဆည်းဆာ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Meyer ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လို့ပါ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူဟာ ၁၅ နှစ်စာပေအတွေ့အကြုံတိုးတက်မှုကိုပြသခဲ့တယ်။
ထိုကွောငျ့, သန်းခေါင်နေရောင် ၎င်း၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆင်တူသောမြင်ကွင်းများအများအပြားရှိနေသော်လည်းပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည် ဆည်းဆာ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများစုတွင်ဖော်ပြသည် သန်းခေါင်နေရောင် ၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော်လည်း၎င်းသည် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ ၆၅၈ မျက်နှာသည် Bella ပြောသောစာသားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစာမျက်နှာ ၁၆၀ ထက်ပိုသောစာမျက်နှာများကိုကိုယ်စားပြုသည်။
con သန်းခေါင်နေရောင်, Avid Meyer ပရိသတ်များသည်အက်ဒွပ် Cullen ၏ Bella Swan ကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်အတွက်နောက်ဆုံး၌သူတို့၏အမြင်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်စာအုပ်သည် Cullen မိသားစုအတွင်းအတူတကွနေထိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ အလားတူပင်စာသားတွင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနှင့်သွေးစုပ်နေသောဇာတ်ကောင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္anာန်ဟာ ၁၈ နှစ်အရွယ်တူတူဖြစ်ပေမယ့်သူ့အတွေးကရင့်ကျက်တဲ့အဆင့်ကိုပြနေပါတယ်။ တကယ်တော့ အက်ဒွပ်၏စိတ်ဓာတ်သည်သူ၏စစ်မှန်သောအသက် (၁၀၄ နှစ်) ၏ယုတ္တိအကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်စာရေးဆရာသည်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုဘီလာပြောပြသည်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးသော၊
အက်ဒွပ်၏ထင်မြင်ယူဆပုံ - ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးလှုံ့ဆော်မှု - သည်အဆုံးသတ်ကိုသူတို့သိနှင့်ပြီလားမခွဲခြားဘဲသူ၏စာဖတ်သူများကိုလျင်မြန်စွာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ငြားလည်း, အဆိုပါသိသာခြားနားချက်များတစ်ခုအတော်လေးသွေးထွက်သံယိုပုံရိပ်တွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မတူဘဲ ဆည်းဆာ, သန်းခေါင် Sun က ၎င်းသည်လူငယ်စာပေဘွဲ့မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူစာအုပ်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်ရှိစာပေ » အမျိုးအစားများ » Novela » သန်းခေါင်နေရောင်
Blas Ruiz Grau ။ အဆိုပါ Mors Saga ၏စာရေးဆရာနှင့်အင်တာဗျူး